Madaxda S Sudan oo lagu eedeeyay inay "ka macaasha" dagaalka - BBC Somali
Madaxda S Sudan oo lagu eedeeyay inay "ka macaasha" dagaalka
Image caption madaxweynaha iyo hogaamiyaha mucaaradka ee South Sudan
Wasiirka warfaafinta Sudanta Koofureed waxa uu sheegayaa in dowladda aysan ka jawaabi doonin eedeymaha cusub oo ku qoran warbixin cusub oo hogaamiyayaasha dalkaasi ku sheegtay inuu ka faa'idaayo dagaalka oo siixumaada.
Michael Maquei Lueth waxa uu sheegay in dowladda ay hayso waxyaabo badan oo ay ka dhahdo eedaha loo jeediyay, laakiin aysan ka jawaabi doonin illaa faafaahinta si rasmi ah loo shaacinaayo.
Wasiirka oo BBC-da la hadlay waxa uu sheegay, "Anaga, dowladda South Sudan, kama jawaabi karno warbixinno lagu baahiyay baraha bulshada".
waxa uu sidoo kale xusay in "Warbixin kastaa waxaad moodaa in loogu talagalay in si rasmi ah lo shaaciyo. Waa markaasi kadib xilliga aan fikirkeena ka dhiibankarno, laakiin hadda maahan".
Baaritaanka oo uu horkacayay, ololeeyaha, iyo jilaaga ka tirsan Hollywood, George Clooney waxa ay madaxweyne Salva Kiir iyo hogaamiyaha mucaaradka Riek Machar, iyo taliyayaasha ciidamada iyo qoysaskooda ku sheegay inay dhaqaale badan aruursadeen.
warbixinta ayaa madaxda Sudanta koofureed la xiriirineysa lacag badan oo ay ka mid yihiin guryo waaweyn oo raaxo, macdan, shidaal iyo shirkado kale oo dibadda ku yaalla.
Asigoo ka hadlayay shir jaraa'id oo lagu qabtay Washington, Clooney waxa uu sheegay in cadeymaha ay yihiin kuwo aan la dafiri karin.